Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mbata HBO Max na Spain | Akụkọ Ngwa
Miguel Hernandez | 09/09/2021 13:07 | Ihe nkiri na usoro, Home
HBO Ọ nọla n'ahịa maka ịkwanye ndị na -eweta ọdịnaya ihe nkiri ọdịyo ogologo oge, ọkachasị na -enye franchise ya kachasị amasị. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ihe na -eme ka ndị ọrụ gbapụ ọrụ na Spain n'ihi ogo onyonyo dị ala yana ngwa adịghị mma, ihe ga -emecha bụrụ akụkọ ihe mere eme.
HBO mara ọkwa ọbịbịa HBO Max na Spain, anyị na -egosi gị ọdịnaya ya yana mgbanwe ị ga -eburu n'uche iji nụ ụtọ ọrụ ahụ. Chọpụta anyị otu esi enweta ihe kachasị na HBO Max ma jiri ntuziaka doro anya jiri ohere ikpo okwu mee ihe kacha mma.
1 HBO Max na mbata ya na Spain
2 Kedu maka ndenye aha HBO m ugbu a?
3 Mgbanwe na ọnụahịa na ikpo okwu HBO Max
4 Kedu ihe ga -abụ katalọgụ HBO Max na Spain?
HBO Max na mbata ya na Spain
Ejirila ọrụ HBO Max nwa oge na mba ndị ọzọ dịka United States of America na maka nke a ha nwere webụsaịtị gị na Spain. Dịka HBO kwupụtara, ọrụ ahụ na -enye gị akụkọ kacha mma Warner Bros., HBO, Max Originals, DC Comics, Network Cartoon na ọtụtụ ndị ọzọ, ọnụ maka oge mbụ (opekata mpe na Spain). Ihe ga -ebute obi abụọ n'etiti ụfọdụ ndị ọrụ, mana echegbula, n'ihi na anyị bịara idozi obi abụọ niile nwere ike ibilite.
Jikere ịhụnanya maka usoro nkwanye ọhụụ nke ga -ada na Spain na Ọktoba 26 #NdewoHBOMax pic.twitter.com/VwU0s9bawM
Ihe mbụ bụ ka o doo anya na n'eziokwu na Ọktoba 26 na -esote ị ga -enwe ike ịnụ ụtọ HBO ọkọlọtọ dị ka ihe ndị ọzọ WarnerMedia mepụtara ma malite n'otu ikpo okwu na -enweghị nkwekọrịta ọrụ dị iche iche site na ndị na -eweta telivishọn ọdịnala dịka Movistar, n'etiti ndị ọzọ.
N'otu oge HBO Max ga -abata na Spain, Sweden, Denmark, Norway, Finland na Andorra na Ọktoba 26 a. Ka oge na -aga, mmụba ahụ ga -aga n'ihu na Portugal, n'etiti mba ndị ọzọ, agbanyeghị na enwetabeghị ụbọchị ndị ahụ.
Kedu maka ndenye aha HBO m ugbu a?
Na nkenke, ọ nweghị ihe ga -eme. HBO ga -ewepụta oge mmegharị, mana ihe bụ isi ihe ha ga -eme bụ ikpochapụ usoro ọdịnala HBO, nke ọtụtụ ga -eji obi ụtọ chefuo ya, a ga -etinye data ahụ na akpaghị aka. HBO Max. Nke a pụtara na:
Ị ga -eji nzere HBO gị (ndị ọrụ na okwuntughe) banye na HBO Max.
A ga -echekwa data ahụ, chekwaa, a ga -emepụtagharị ihe ndị dị n'ime ebe ị hapụrụ ha
Na nkenke, otu October 26 ka akaụntụ HBO gị ga -agbanwe na akaụntụ HBO Max na -akpaghị aka ị ga -enwekwa ike ịnụ ụtọ ọdịnaya niile ikpo okwu ọhụrụ na -enye gị.
Mgbanwe na ọnụahịa na ikpo okwu HBO Max
HBO ekwenyebeghị ma a ga -enwe mgbanwe na ọnụahịa a na -akwụ ndị ọrụ, n'ezie, mgbe ebugharịla ọrụ ahụ. HBO ruo HBO Max na United States of America na LATAM enwebeghị ịrị elu ọnụahịa.
N'ezie, na -eburu n'uche na HBO ekwenyela na mbufe akaụntụ na ozi ga -akpaghị aka, Ihe niile na -egosi na a gaghị enwe mgbanwe na ndenye aha. Ọzọkwa, ọ bụrụ na i jiri HBO mee ihe site na onyinye nke ụlọ ọrụ ekwentị gị ma ọ bụ onye na -ahụ maka ịntanetị na -enye gị, ọ nweghị ihe ga -agbanwe n'ihi na nzere gị ga -esi n'otu ikpo okwu gaa n'ọzọ.
Kedu ihe ga -abụ katalọgụ HBO Max na Spain?
Dịka ị marala, HBO bụ akụkụ nke Warner, yabụ, anyị ga -enwe ike ịnụ ụtọ katalọgụ HBO na mgbakwunye Netwọk katuunu, TBS, TNT, Igwu ndị okenye, The CW, DC Universe na ihe nkiri nke ụlọ ọrụ ahụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe metụtara ya dị ka Cinema New Line. Obi abụọ adịghị ya, katalọgụ ahụ ga -eto na ogo ya:
Nnukwu ndị na -eme ngagharị iwe, akụkọ kacha atọ ụtọ, na akụkọ ochie agaghị echefu echefu nke mere anyị ka anyị bụrụ. Ihe niile dị na HBO Max.
Franchise DC eluigwe na ala
Mwepụta ọhụrụ nke Warner: Space Jam: Akụkọ Ifo Ọhụrụ
Na mgbakwunye, ha nwere ọtụtụ ikike dịka Enyi, The Big Bang Theory ma ọ bụ South Park iji meziwanye katalọgụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ihe nkiri na usoro » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mbata HBO Max na Spain